ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုနှင့် စိုက်စရိတ် ကြီးခြင်းတို့ကြောင့် ကုလားပဲနှင့် ကြက်သွန်စိုက်ပျိုး? - Yangon Media Group
ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုနှင့် စိုက်စရိတ် ကြီးခြင်းတို့ကြောင့် ကုလားပဲနှင့် ကြက်သွန်စိုက်ပျိုး?
မကွေး၊ ဇန်နဝါရီ ၇
ယခုနှစ် ဆောင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးချိန်တွင် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံအတွက် အရင်းအနှီးကြီးခြင်းတို့ ကြောင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ကုလားပဲနှင့် ကြက်သွန်စိုက်ပျိုးမှုမှာ ယမန်နှစ်ကထက်လျော့နည်းခဲ့ကြောင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှသိရသည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် ကုလားပဲစိုက်ဧက ၁၇၄၁၄၂ ဧက စိုက်ပျိုး ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်ကုလားပဲစိုက်ဧကမှာ ၁၃၂၆၆၃ ဧကရှိပြီး ကြက်သွန် နီစိုက်ဧကမှာ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုနှစ် တွင် ၃၉ဝ၆၉ ဧကစိုက်ပျိုးခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်တွင် ကြက်သွန်နီစိုက်ဧက ၃၁၄၈၂ ဧကသာ စိုက်ပျိုးခဲ့ကြောင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနမှသိရသည်။ ယခုနှစ်ဆောင်းရာသီစိုက်ပျိုးချိန်တွင် ရာသီဥတုမကြိုက်ခြင်း၊ ရာသီဥတုမမှန်ခြင်း၊ အရင်းအနှီး ကြီးခြင်းတို့ကြောင့် တောင်သူများ စိုက်ပျိုးမည့်သီးနှံများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဆောင်းသီးနှံ စိုက်ပျိုးရာသီချိန်တွင် တောင်သူများသည် အရှုံးပေါ်မည်စိုးရိမ်၍ သီးနှံများကို လျော့နည်းစိုက်ပျိုး ကြသည်။
”ဒီနှစ်ဆောင်းအဝင် ရာသီဥတုကမမှန်ဘူး။ အချိန်အခါမဟုတ် မိုးရွာတယ်။ မိုးအုံ့တာတွေက ဆောင်း ရာသီသီးနှံဖြစ်တဲ့ ကြက်သွန်နီ၊ ကုလားပဲ၊ အာလူးစတဲ့ သီးနှံတွေ နဲ့အဆင်မပြေဘူး။ ကြက်သွန်နီတို့ အာလူးတို့စိုက်ပျိုးရင် အရင်း အနှီးကကြီးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် တောင်သူတွေက အရှုံးကိုရင်မဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက် ဆောင်းသီးနှံကို လျော့နည်းစိုက်ကြတာ”ဟု ပုထိုးကျေးရွာမှ တောင်သူဦးမျိုး ညွန့်ကပြောကြားသည်။
မကွေးမြို့နယ် ယင်းကွေ့ ချောင်းတစ်လျှောက်တွင် စိုက်ပျိုးထားသည့် ကြက်သွန်နီ၊ ကုလားပဲ နှင့်အာလူးသီးနှံများမှာ မိုးများပါက အသီးနှင့်ဥများပုပ်တတ်ခြင်း၊ အပင်များရေနာခြင်းတို့ဖြစ်တတ်သည့်အပြင် မိုးအုံ့ပါက အပင်များအား ပိုးဝင်တတ်သောကြောင့် တောင်သူများမှာ ယခုနှစ်ရာသီဥတုမကြိုက်၍ ဆောင်းသီးနှံလျော့ နည်းစိုက်ပျိုးကြသည်။ ကြက်သွန်နီနှင့် အာလူး၊ စိုက်ပျိုးစရိတ်မှာ တစ်ဧကလျင် ငွေကျပ် ခြောက်သိန်းခန့် ကုန်ကျစရိတ်ရှိ ပြီး ကုလားပဲတစ်ဧကလျှင်ငွေကျပ်သုံးသိန်းကျော်ကုန် ကျစရိတ်ရှိ ကြောင်းသိရသည်။
မုံရွာမြို့နယ်မှ တောင်သူကြီး ဦးကျော်ဝင်း မကွယ်လွန်ခင် ကြိုတင် အစမ်းသေ ဈာပနပြုလုပ်၍ ဂူသွ??
စေ့စပ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း မင်းသမီး ဂျန်နီဖာလောရန့်စ် အတည်ပြု